IXABISO LEMARBLE COUNTERTOPS - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Ixabiso leMarble Countertops
Ixabiso leMarble Countertops
Akukho zixhobo zibabazekayo kwaye ziyonwabisa kunemabhile. Kule minyaka isetyenziselwa usetyenziso olwahlukeneyo kwaye ithathwa njengeyona nto iphambili kwimifanekiso eqingqiweyo ngenxa yokuguquguquka kwayo, ukutyeba kunye nokuqina kwayo. Ibihleli ikukukhetha okuhle kwimigangatho yokuhlalisa kunye nokuhlambela kunye nekhitshi emakhayeni kwaye akukho nto iyiphikayo into yokuba yongeza ubutyebi obunqwenelekayo kunye nobuhle obungapheliyo kwizithuba zethu zangaphakathi. Apha ngezantsi uyakufumana iindleko zemiphezulu yeetafile zemabhile kunye nezinye zeentlobo ezithandwa kakhulu ezisetyenziselwa ukwakhiwa kwamakhaya amatsha kunye neeprojekthi zokulungisa kwakhona.
Imiphezulu yeetafile zekhitshi leMarble zizinzile, ziluncedo olulula kwaye ziyamangalisa kodwa kuhlala kukho indleko ekufuneka ithathelwe ingqalelo. IMarble ayisiyondawo ifikelelekayo kodwa khumbula ukuba uhlawula ixabiso lobuhle nobukhazikhazi obunikelayo. Ukukhetha iimabula kwiitafile kufana nokukhetha iirubhi njengoko zohluka ngokwamanqanaba, umgangatho kunye neendleko eziza nayo.
Ngodliwanondlebe olwenziwe nguMcoci weMarble, i-countertop yemarble ephakathi inokubiza i- $ 50-250 ngeenyawo zenyawo. Ixabiso lilonke le-countertop linokusebenza libe yi- $ 3500 - 4000. ndwendwela eli phepha ngaphezulu Iindleko zokulungisa iikhitshi .
Iindleko zeetheyibhile zemarble ziya kuxhomekeka:
Umgangatho wemabhile esetyenzisiweyo, ubukhulu kunye nemibala eyahlukeneyo edlala indima ekuguqukeni kwexabiso. Imabhile emenyezelelweyo iya kubiza kakhulu kunesiqwenga esimbejembeje. Ubungakanani be-marble obonelelweyo namhlanje yi-3cm kwaye ukuba ukhetha i-2cm okanye i-5cm, ixabiso liyakuguquka.
Ukufakwa kunye neendleko zabasebenzi ezibandakanya nokususwa kwetheyibhile endala, ukucoca njlnjl. Kuxhomekeke kubunzima bokuyilwa kunye nofakelo, ixabiso lokufaka eliqhelekileyo ngeenyawo zenyawo nganye liya kuba malunga ne-40-60 yeedola.
Iindleko ezongeziweyo zokusikwa, ukuhlelwa kweekhawuntari, ukuyila, ukutywina umphezulu njl njl.
Umbala yenye yezona zinto zibalulekileyo xa kusenziwa kwilitye. Isimhlophe (ewe simhlophe asikhaphukhaphu), njengakowona mhlophe ugxunyekileyo, ococekileyo omhlophe uya kuba yeyona ibiza kakhulu. Lo mthetho mnye uya kumnyama, eyona fomu inyulu iya kuba yexabiso eliphezulu. Ukusuka apho unokufumana i-creamier emhlophe okanye engwevu emnyama ukunciphisa iindleko zelitye.
Ukufakelwa yindleko eya kuba yinxalenye yale projekthi, ke sukuyivumela ishiye ingqondo. Ngokucacileyo, ukujiya kwemabhile, kuya kubiza kakhulu. Nakuphi na ukusika okungaphezulu kuyo, okufana nomngxuma wokuntywila, kuya kongeza kwiindleko.
Xa ujonga ekuthengweni kwemarble abathengisi abambalwa abacetyiswayo zezi: MSI Stone, Silestone, Daltile, kunye neCambria. Uninzi lwaba bavelisi bajongana nemarble yekhaya kunye nekhitshi kuphela kodwa kunye nemarble yentengiso. Oku kunokuthetha ukuba amaxabiso abo anexabiso elincinci ngakumbi ngenxa yobuninzi bokwenza. Xa besenza imveliso enye rhoqo ibavumela ukuba bagcine ixabiso elikhuphisana ngakumbi.
Rhoqo xa uthenga iziqwenga ezimbalwa zemabhile awuyi kuthenga ngqo kumenzi. Umzekelo umntu unokukhangela kwiwebhusayithi ye-MSI Stone, kwaye ukhethe isiqwenga semabhile esivela apho, kodwa ngekhe uthenge kubo ngokuthe ngqo. Kukho abasasazi bengingqi abaza kukuthumela kubo. Ngokusisiseko xa ufuna ukuthenga i-marble enye iya kudityaniswa nomthengisi wamatye wasekhaya ukuze atyelele kwaye abone ukhetho lwabo buqu. Oku kubalulekile kuba, kuba isiqwenga setye sijongeka ngokuchanekileyo kanye njengoko umthengi efuna, oko akuthethi ukuba kunjalo.
Izikrini zekhompyuter zibonisa imibala eyahlukeneyo kwiscreen ngasinye, kwiphepha ngalinye. Nokuba ungangaphi amaxesha ophethe umbala wepeyinti ecaleni kwescreen sekhompyuter, awuyi kufumana lungelo lifanelekileyo! Kungenxa yoko le nto xa uthenga ilitye leprojekthi umntu kufuneka atyelele ivenkile okanye a-odole iisampulu kwi-intanethi kwiwebhusayithi yabenzi. Soloko ufumana isampulu yomzimba.
Njengoko kuchaziwe umgangatho wemarble udlala indima ebalulekileyo ekumiseni iindleko ezipheleleyo ze-countertop kwaye kukho iimpawu ezahlukeneyo zemarble ezikhoyo kwimarike. Nangona imarble ifumaneka kwimimandla eyahlukeneyo yaseYurophu naseCanada, uninzi lwayo luvela kwimimandla yase-Itali.
I-Marble eyaziwayo kwi-Countertops
Imarble yaseCarrara - le marble ifunyenwe eCarrara, e-Itali yenye yezona ndawo zixhaphakileyo zemarble kwaye yeyona inexabiso eliphantsi ngenxa yokufumaneka kwayo ngokubanzi. Imithambo yayo ethambileyo, emgceni engwevu inokunika inkangeleko emangazayo yeetafile.
Isinxibo somtshato elwandle yamadoda
UCarrara White Marble
Kumgangatho ophezulu - ithathelwa ingqalelo njengemabhile exabisekileyo ngaphakathi kwexabiso eliphezulu kunye nembonakalo emhlophe yobisi enemithambo enzulu entle engwevu ebaleka rhoqo kwimathiriyeli.
Imifanekiso eqingqiweyo yeMarble
Imabhile yeCalacatta -Ixabisa kakhulu kunoluhlu lweMarble njengoko kunqabile kunepateni enkulu yokuhombisa kunye nokukhanya okumbala kancinci kuneCarrara.
ICalacatta Carrara Marble
Ixabiso lemarble lixhomekeke kubukhulu kunye nohlobo lwelitye elisetyenzisiweyo. Apha ngezantsi ungabona iindidi ngexabiso lamaxabiso eendidi ezimbalwa zemarble.
Ukutyeba kweMarble / Uhlobo
Umahluko phakathi komkhonzazana nembeko
UBianco Carrara- $ 37.00 / SF - 3cm / ipolishiwe
ICalacatta- $ 149.00 / SF - 3cm / ipolishiwe
IBianco Statuario- $ 288.00 / SF - 3cm / ipolishiwe
IArabescato Carrara Marble
Nangona i-marble ibiza kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iipliti zamatye, ukuba ungumtshatsheli weemabula okanye ufuna ukongeza umgca wokugqibela kunye ne-wow factor ekhitshini lakho ke le nto intle yenzelwe wena.
Iindidi zeeKhawuntari zeKhitshi - Imiphezulu yeetafile zekhitshi leMarble - Imibala yeCwecwe yoMgangatho - Uyilo lweKhitshi Iingcamango
Iringi yomtshato eneesafire kunye nedayimani
ikhabethe elimnyama lekhitshi
izipho zomtshato wesibini
udonga lokuhlambela ngenqanawa
utshatile nini uMelania
imibala yepeyinti yokuhlambela eyi-master
iingoma malunga noomama noonyana